April 2020 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
လာမယ့် ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ Xiaomi ဟာ သူ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် MIUI 12 OS နဲ့ Mi 10 Youth ကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့မှာပါ.. Mi10 Youth ရဲ့ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း အရောင်ပေါင်းစုံနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ကြော်ငြာထားတာကို Playfuldroid ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်မှာ တွေ့လိုက်ပါသေးတယ်..
TENAA ရဲ့ဖေါ်ပြချက်အရ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးလို့ကောင်းမယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ Xiaom Mi 10 Youth မှာ−
Snapdragon 765 SOC ကို 2.4 GHz CPU နဲ့မောင်းနှင်ထားမယ်
4GB, 6GB နဲ့ 8GB ဆိုပြီး RAM ကို ၃ မျိုးရွေးချယ်နိုင်မယ်..
Storage ကိုလည်း 64GB, 128GB နဲ့ 256GB ဆိုပြီး ၃ မျိုး ရွေးချယ်နိုင်မယ်..
6.57 လက်မ OLED မျက်နှာပြင်မှာ Waterdrop notch တပ်ဆင်ပေးထားပြီး underdisplay fingerprint လည်း မြှပ်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်..
100mm သာထူပြီး အလေးချိန်ကလည်း 200 ဂရမ်သာရှိတယ်ဆိုတော့ တော်တော်ပါးပြီး ပေါ့မယ့်ပုံပါပဲ..
48MP Main Camera ပါဝင်တဲ့ ကင်မရာ ၄ လုံးတပ်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲက တစ်လုံးဟာ 50X ထိထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ Periscope Zoom ဖြစ်သတဲ့..
4060mAh ဘက်ထရီကို 18W ဒါမှဟုတ် 27W Fast-Charging စနစ်ပါမယ်လို့ဆိုပေမယ့် အချို့ကတော့ 22.5W ပါမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်..
Ref : GiZChina, Playfuldroid
Maung Pauk at 11:12:00 PM 0
ဒီနှစ်ထဲမှာ OnePlus က Smartphone ၃ မျိုးကို စျေးကွက်ထဲကိုပို့မယ်လို့ ကောလဟာလသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီထဲက OnePlus 8 နဲ့ OnePlus 8 Pro ကတော့ ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ.. နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ OnePlus Z ကတော့ COVID-19 ကြောင့် နှောင့်နှေးနေပုံရပါတယ်..
Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ OnePlus Z Surface နဲ့ပတ်သက်လို့ တိတ်ဆိတ်နေကြစဉ်မှာပဲ OnePlus Z ရဲ့ပုံတွေဆိုပြီး တင်လာခဲ့ပါတယ်.. လေးထောင့်ကျကျပုံစံ၊ Punch-hole ကိုအလယ်မှာထားပြီး ဘေးဘောင်တွေက မထူလွန်း၊ မပါးလွန်းတဲ့ ဒီပုံဟာ တကယ်ပဲ OnePlus Z လေလား..
ကောလဟာလသတင်းတွေအရတော့ OnePlus Z မှာ
SOC ကို MediaTek Dimensity 1000 နဲ့သုံးပေးထားမှာဖြစ်ပြီး 5G ရပါမယ်..
Main Camera ကို 48MP ကိုအဓိကထားပြီး 16MP နဲ့ 12MP နှစ်လုံးပေါင်းကာ ကင်မရာ ၃ လုံးပါဝင်ပါမယ်..
6.4 လက်မရှိတဲ့ OLED မျက်နှာပြင်ကို 90Hz refresh rate နဲ့..
8GB RAM က လုံလောက်တဲ့ပမာဏပါ..
125GB ဒါမှမဟုတ် 256GB Storage
4000mAh ဘက်ထရီကို အားသွင်းဖို့ 30W Fast-charging စနစ်နဲ့ထောက်ပံ့ထားမယ်ဆိုတော့ Mid-range မကတော့တဲ့အနေအထားပါ..
Maung Pauk at 8:00:00 PM 0
COVID-19 ကာလမှာ အကြည့်သင့်ဆုံး ဇာတ်ကား ၃ ကားနဲ့ Documentary ၂ ပိုင်း
Maung Pauk at 12:04:00 AM 0
ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေဟာ COVID-19 မဖြစ်ခင် ကတည်းက ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး၊ ဝက်တုပ်ကွေး စတဲ့ ကူးစက်မြန်ရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်..
ကူးစက်မြန်တုပ်ကွေးရောဂါတွေအကြောင်း၊ ကူးစက်ပုံကူးစက်နည်း၊ ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း စတဲ့ ဗဟုသုတတွေအပြင် ဝမ်းနည်း/ဝမ်းသာ ရသတွေကိုပါ ခံစားကြရမှာပါ..
ကိုယ်တိုင်သာမက ကိုယ့်အိမ်ကကလေးငယ်တွေနဲ့ မိသားစုတစ်ခုလုံး ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်.. Stay Home နေကြတုန်း အပျင်းလည်းပြေ၊ ဗဟုသုတလည်းရပေါ့ဗျာ..
ဇာတ်ကားအားလုံးကို Channelmyanmar က Download ရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်..
မူရင်း www.channelmyanmar.org မှာ ဇာတ်ကားတစ်ကားချင်းအလိုက် Review တွေကိုဖတ်နိုင်၊ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်..
ကျနော်က ကိုယ်ပိုင် Mediafire အကောင့်မှာ တင်ထားမိတာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
ဇာတ်ကား ၃ ကားနဲ့ Documentary အပိုင်း ၂ ပိုင်းလုံးကို Link တစ်ခုတည်းနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်..
၁. Tht Flu (2013)
၂. Contagion (2011)
Browser Chrome Windows Software
Google Chrome ကို Online Installer နဲ့တင်တာ ကျွန်တော်တော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး.. ကျနော့်လိုပဲ Offline Installer ကို လိုချင်သူတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို ရယူနိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် သီးသန့် Application ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ Facebook
Maung Pauk at 3:42:00 PM 0
Facebook ဟာ ဝေးကွာနေတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေကို ပိုမိုနီးကပ်စေဖို့ Tuned လိုခေါ်တဲ့ Application တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်..
ချစ်သူနှစ်ဦး ကောင်းကောင်းရိုနိုင်အောင် Feature ဆန်းတွေထည့်သွင်းထားပြီး Voice Memos တွေ၊ Card, Note တွေ၊ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Custom Sticker တွေ အပြန်အလှန်ပေးပို့နိုင်တဲ့အပြင် Scrapbook လို Feed ဖန်တီးပြီး ချစ်သူ့အမှတ်တရတွေကို ပြန်လည်မျှဝေ ကြည်နူးနိုင်ပါတယ်..
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ သံစဉ်တေးသွားလေးတွေကို မျှဝေခံစားဖို့ Spotify နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်..
Coronavirus ကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ ချစ်သူတွေကြား ဖုန်းတွေ၊ သာမန် Messenger တွေထက် ပိုမိုကြည်နူးစရာကောင်းမှာတော့ အမှန်ပါပဲ..
Facebook's New Product Experimentation (NPE) team က Develop လုပ်ထားတဲ့ ဒီ Tuned App ဟာ iOS အတွက်ပဲရသေးတာဖြစ်ပြီး Android အတွက်တော့ ဘာသတင်းကိုမှ ဖေါ်ပြထားတာမတွေ့ရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး..
Download Tuned for iOS
Maung Pauk at 2:32:00 PM 0
စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူ ၁ သန်းလောက်ဟာ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေပြီး ဘက်ထရီကိုပါ အားကုန်မြန်စေမယ့် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Application တွေကို Download လုပ်ရယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ Express သတင်းဌာနက ရေးသားသတိပေးလိုက်ပါတယ်..
ခုလည်း မုန်းဖို့ကောင်း၊ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ တုန်လှုပ်ဖွယ် Application ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သုတေသနသမားတွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြန်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်..
ဒီ စိတ်ပျက်စရာ Application တွေဟာ Google Play Store ကနေ Download ရယူဖို့ အသုံးပြုသူတွေကိုသာမက Play Store ကိုပါ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့လှည့်စားထားတာမို့ သတိထားဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်..
တကယ်လို့များ ခုပြောပြမယ့်စာရင်းထဲက Application တစ်ခုခုကို Install လုပ်မိထားတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းဖျက်ပစ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သုံးစွဲသူဆီက အချက်အလက်တွေကို နောက်ကွယ်ကနေ တရားမဝင်ရယူထားပြီး အခြား ဒုက္ခကြီးကြီးမား မဖြစ်ရင်တောင် ကြော်ြငာတွေများစွာကို နောက်ကွယ်က Run ခိုင်းစေပြီး ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်..
Google Play Store ဟာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစီအမံတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေပေမယ့် ယိုပေါက်တွေကို သိထားတဲ့ Hacker တွေဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Application တွေကို Google Play Store ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူတွေဆီ ဖြန့်ဝေနေတုန်းပါပဲ.
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ Android Application တွေကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Battery ကို အမြန်ဆုံး ကုန်ခမ်းစေပြီး စိတ်ပျက်ဖွယ် ကြော်ငြာများစွာကြောင့် ကိုယ်မသိလိုက်ဘဲ အင်တာနက် Bill တွေကို နောက်ကွယ်က ဆွဲယူသုံးစွဲနေတဲ့ Application တွေဖြစ်ပါတယ်..
လုံခြုံရေးသုတေသနပညာရှင်တွေအကြံပြုထားတဲ့ အန္တရာယ်ရှိ Application တွေကတော့ −
ကဲ.. အပေါ်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ စာရင်းထဲက Android Application တစ်ခုခုသာ Install လုပ်မိထားရင်တော့ ချက်ချင် Uninstall လုပ်ပစ်ကြဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်နှော..
Ref : https://www.express.co.uk/
Maung Pauk at 11:46:00 AM 0
Cannon ဟာ ခုအသစ်ပွဲထုတ်တော့မယ့် EOS R5 မှာ Wifi ကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်ပြီး 5Ghz ပါလာဖို့ သေချာသွားပါပြီလို Korean certification agency တစ်ခုက ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်..
အခြားအချက်အလက်တွေကို အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုပေမယ့် ကောလဟာလ သတင်းတွေအရတော့ EOS R5 မှာ အောက်ပါအချက်အလက်တိုင်းပါဝင်မယ်လို့ ဖေါ်ပြနေကြပါတယ်−
Canon EOS R5 specifications: (rumored specifications in bold)
Source Via : Canon Rumors and NokiShita
Tech News Tutorial Tutorial Videos
Maung Pauk at 6:27:00 PM 0
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ Corona Virus (COVID-19) တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်သုတေသနလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာလေး ၁ လုံးရှိရုံနဲ့ ထိုင်ရာကမထ၊ နည်းပညာသိစရာမလို၊ အခြားဘာမှ တတ်ကျွမ်းစရာမလိုဘဲ ကူညီနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်..
ဘယ်လိုကူညီလို့ရမလဲဆိုတာကို အောက်က Video လေးမှာ ရှင်းပြထားပါတယ်..
Ref : https://foldingathome.org
Credit : https://www.youtube.com/watch?v=wypC32o1tPA